Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Sandal Resorts: folo taona niatrika an'i Karaiba
Antigua & Barbuda Breaking News • Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana Barbados • Karaiba • Vaovao Mafana Curacao • Grenada Breaking News • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao lafo vidy • Vaovao • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Saint Lucia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Aogositra 16, 2021
Sandals Foundation manampy an'i Karaiba
Ity taona ity dia manamarika ny tsingerintaona 10 an'ny Sandals Foundation, sandry sandan'ny Sandals and Beaches Resorts. Nandritra ny folo taona lasa, ny Sandals dia niasa tsy nisy tohiny mba hisy fiantraikany tsara amin'ny fiainan'ny olona 840,000 manerana an'i Karaiba.
Sandals Resorts International dia naka ny zavatra hafa tokony hatao any amin'ireo nosy misy azy.
Tsy vitan'ny fanangonana sy fandaniana vola fotsiny fa ny Sandals koa dia mampiasa ny fitiavany, ny heriny, ny fahaizany ary ny tanjaky ny marika.
Ny Sandals Foundation dia miatrika olana mifantoka amin'ny lohateny telo lehibe - fanabeazana, fiarahamonina ary tontolo iainana.
Sandals Resorts dia manolo-tena amin'ny famatsiam-bola izay miteraka fiovana tsara sy maharitra amin'ireo nosy antsoiny hoe fonenany. Amin'ny alàlan'ny Sandals Foundation, Sandals Resorts International dia ahafahana mandray bebe kokoa amin'ireo zavatra tokony hatao any amin'ireo nosy izay anaovany izany amin'ny alàlan'ny fanaovana an'i Karaiba ho tsara indrindra araka izay tratrany. Tsy ny fanangonana sy fandaniana vola fotsiny. Sandals koa dia manararaotra ny fitiavany, ny heriny, ny fahaizany ary ny tanjaky ny marika hamahana ireo olana mifantoka amin'ny lohateny telo lehibe - ny fanabeazana, ny fiaraha-monina ary ny tontolo iainana.
The Fondation Sandals manome ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe fitaovana ilaina toy ny vatsim-pianarana, kojakoja, teknolojia, fandaharana mamaky teny sy manoratra, mpampianatra ary fanofanana mpampianatra, hanampiana azy ireo hahatratra ny fahaizany feno. Hatreto dia 59,036 pounds ny kojakoja natolotra niaraka tamin'ny sekoly 578 izay nisy fiatraikany tsara, anisan'izany ny solosaina 2,506 nomena; Boky 274,517 no natolotra; Mpianatra 169,079 no voadona; Mpampianatra 2,455 180 voaofana; ary vatsim-pianarana XNUMX no natolotra.
Ao amin'ny Sandals Foundation, noforonina ary notohanana ny fandraisana andraikitra izay mampifandray sy manome aingam-panahy ny olona amin'ny alàlan'ny fanofanana fahaiza-manao ary miatrika olana ara-tsosialy sarotra alohan'ny hanamafisana orina ny vondrom-piarahamonina. Miisa 384,626 ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina nisy fiatraikany tamin'ny fananganana olona 248,714 tamin'ny alàlan'ny hetsika ara-pahasalamana; 243,127 endrika mahafinaritra! Inc. Dental + iCARE marary, kilasy fanomezana 102,150; Saka sy alika 4,218 no voaeloka sy mandeha amin'ny laoniny; ary zazakely mialoha ny fotoana 397 mahazo vintana amin'ny alàlan'ny fanampian'ny Foundation manontolo mpilatsaka an-tsitrapo 24,215.
Amin'ny maha Sandals azy ireo dia mampanantena izy ireo fa hanentana ny tontolo iainana, hampivelatra ny fomba fitehirizana mahomby ary hampianatra ny taranaka ho avy hikarakara ny vondrom-piarahamonin'izy ireo sy hitahiry ny manodidina azy ireo. Noho ny kapa, ny fahatsiarovan-tena momba ny tontolo iainana dia nahatratra 43,871 tamin'ny hazo 12,565 nambolena; Sokatra 83,304 XNUMX no natao foy soa aman-tsara; Sombin-dranomasina 6,000 nambolena; 37,092 6 pounds ny fako voaangona; ary toeram-pialofana an-dranomasina XNUMX mahazo fanohanana avy amin'ny Sandals Foundation.
Ny fanomezana rehetra, na vola, serivisy, na in-kind, 100% dia mandeha mivantana hanohanana ireo programa sy fandraisana andraikitra amin'ny Sandals Foundation, izay misy fiovana maharitra ho an'ny olona sy ny toerana any Karaiba.
Ny Sandals Foundation dia mitady hanampy amin'ny fanatanterahana ny fampanantenany ho an'ny fiarahamonina Karaiba hanatsara ny fiainam-bahoaka sy hitahiry ny tontolo voajanahary amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny tetikasa maharitra amin'ny fanabeazana, tontolo iainana ary ny fiarahamonina.